By soniya on	 28th December 2019 Highlights, समाचार, समिक्षा
अर्का फिल्ममेकर छन्, वाङ कार वाई । उनलाई सिनेमाको भाषा निर्माणमा मास्टर मानिन्छ । उनी चीनको संघाईबाट माइग्रेन्ट हुन् । क्यान्टोन बस्ने क्रममा साउदर्न नर्थबाट आउँदा अल्पसंख्यकमा परे । उनी संघाई–डाइलग बोल्ने अल्पसंख्यक बने । उनले बनाउने प्रायः फिल्ममा संघाई–स्ट्रिटका कथा हुन्छन् । उनको फिल्मका संवाद चिनियाँ भाषाजस्तो लाग्छ, तर होइन रहेछ । फिल्मका संवादहरू संघाईनिस्ट संवाद रहेछन् । उनलाई हङकङमा बसेर चिनियाँ राष्ट्रियता निर्माण गर्ने फिल्म मेकर भनिन्छ ।
सिनेमाको भाषालाई समृद्ध बनाउन उनले धेरै कोसिस गरेका छन् । उनको फिल्म ‘ग्रान्डमास्टर’का सटहरू हेर्दा ‘नन–रिदमिक’ छ । उनले पछिल्लोपटक क्यामेरा चलाउँदा चाइनिज क्यालिग्राफीलाई पछ्याएका छन् । मोटामोटी रूपमा यस प्रकारको काम सबै सिनेमा उद्योगमा भइरहेका छन् । अनि हामी के गरिरहेका छौँ त ?
संरचनाको कुरामा समय पनि प्रधान हुन्छ । पछिल्लो चरणमा आधुनिक हुने क्रममा धेरै कुरा बाहिरबाट ल्यायौँ । गीतमा पनि हाम्रो थ्री एक्ट संरचना नै हुन्छ । तर, हाम्रो गीत त ‘लै लै रेलै घुमेर’ फेरि … अनि ‘लै लै रेलै घुमेर’ हो । भनेपछि निरन्तर हुने रहेछ ! समयलाई हेर्दा तिब्बतीहरूको भेडा वर्षको बाह्र वर्षपछि भेडा वर्ष नै आउँछ । हिन्दूमा कलिपछि सत्य युग नै हो । समय निरन्तर घुम्ने रहेछ । पश्चिममा भने घुम्ने समय होइन, सीधा हो । हामीमा समयको अधारणा अलिकति फरक छ । समयको अवधारणा भिन्न समुदायमा भिन्न–भिन्न छ । त्यसलाई कसरी सिनेमामा ढाल्छौँ ? प्रश्न यो हो ।
(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजद्वारा आयोजित ‘नेपाली चलचित्रमा मौलिकताको बहस’ विषयक कार्यक्रममा निर्देशक सुब्बाको विचार गरेको विचारको सम्पादित अंश 🙂